Sina no lasa mpamokatra lehibe indrindra sy mpanondrana vokatra fanoherana ny valanaretina toy ny sarontava sy akanjo miaro | Sinnovation
Sina no lasa mpamokatra lehibe indrindra sy mpanondrana vokatra fanoherana ny valanaretina toy ny sarontava sy akanjo fiarovana
Noho ny fifehezana mahomby ny coVID-19 ao an-trano sy ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana mifandraika amin'izany dia lasa mpamokatra sy mpanondrana sarontava, akanjo fiarovana ary vokatra fisorohana valanaretina hafa i Shina, nanampy firenena maro eto amin'izao tontolo izao hiady amin'ny valanaretina. Ankoatra an'i Sina, raha ny tatitra navoakan'ny mpanao gazety Global Times, tsy firenena na faritra maro no manohy manondrana kojakoja ara-pitsaboana.
Ny New York Times dia nitatitra vao haingana fa ny famokarana saron-tava isan'andro an'i Shina dia nitsambikina avy tany 10 tapitrisa tamin'ny voalohan'ny volana febroary ka hatramin'ny 116 tapitrisa, efa-bolana taty aoriana. Araka ny tatitra nataon'ny General Administration of the Customs of The People's Republic of China, nanomboka ny 1 martsa ka hatramin'ny 4 aprily, dia manodidina ny 3,86 miliara ny saron-tava, akanjo fiarovana 37,52 tapitrisa, mpitsongo mari-pana infrared 2,41 tapitrisa, ventilatera 16000, tranga 2,84 tapitrisa an'ny Coronavirus vaovao mpitsikilo ny detectaire ary 8,4 tapitrisa goggles tsiroaroa aondrana manerana ny firenena. Ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny departemantan'ny varotra ivelany ao amin'ny minisiteran'ny varotra dia nanambara ihany koa fa hatramin'ny 4 aprily dia firenena sy faritra 54 ary fikambanana iraisam-pirenena telo no nanao sonia fifanarahana fivarotana ara-barotra ho an'ny orinasa sinoa, ary firenena 74 hafa ary fikambanana iraisam-pirenena 10 no nanao varotra. fifampiraharahana amin'ny orinasa sinoa.
Mifanohitra amin'ny fisokafan'i Shina ny fanondranana kojakoja ara-pahasalamana dia mihamaro ny firenena mametraka fepetra amin'ny fanondranana sarontava, rivotra sy fitaovana hafa. Tamin'ny tatitra navoakan'ny faran'ny volana martsa, ny Global Alert Group Alert ao amin'ny University of St. Gallen any Suisse dia nilaza fa firenena sy faritany 75 no nametra ny famerana ny entam-barotra. Amin'ity toe-javatra ity, tsy firenena na faritra maro no manondrana fitaovam-pitsaboana. Raha ny tatitra nataon'ny haino aman-jery, ny 3M an'ny Etazonia dia nanondrana sarontava tany Canada sy tany Amerika Latina tato ho ato, ary nandefa fiaramanidina ho any Taiwan koa i Nouvelle Zélande hitondra fanafody. Ho fanampin'izany, saron-tava sy kitapo fanandramana sasany koa aondrana any Korea Atsimo, Singapore ary firenena hafa.
Lin Xiansheng, lehiben'ny mpamokatra vokatra ara-pitsaboana monina ao amin'ny faritanin'i Zhejiang, dia nilaza tamin'ny Global Times ny Alatsinainy teo fa miakatra manerantany ny ampaham-bokatra fanondranan'i Shina ny saron-tava ary miakatra kely fotsiny ny fanondranana rivotra sy vokatra hafa. "Betsaka ny famatsiana ara-pahasalamana an'ny orinasa iraisam-pirenena manana ny mari-pamantarana marika ivelany, fa ny tena famokarana dia any Chine ihany." Nilaza Andriamatoa Lin fa araka ny zava-misy eo amin'ny tsena sy ny fangatahana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ankehitriny dia i Shina no hery lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny fanondranana fanafody.